१ सय १७ बर्षकी जापानी महिलाको सुझाव: दीर्घजीवन कसरी पाउने ? | सुदुरपश्चिम खबर
१ सय १७ बर्षकी जापानी महिलाको सुझाव: दीर्घजीवन कसरी पाउने ?
सन् १९४३ मा केनका छोरा नोबोउ पनि आर्मीमा भर्ती भएका थिए । तर दोश्रो विश्व युद्ध पछि सन् १९४७ उनी घर फर्किए । त्यसपछि पनि केनले ६३ वर्षको उमेरमा अवकास नपाउँदासम्म पनि आफ्नै स्टोरमा काम गरिन् ।
लामो आयु बाच्नेमा जापान अगाडी रहेकै कारण जापानलाई ‘ल्याण्ड अफ इममोर्टल (अमर भूमि)’ पनि भन्ने गरिन्छ ।
जापानीजहरु लामो आयु बाँच्नुमा सन्तुलित आहार, स्वस्थकर खानेकुरा र सुधारिएको जीवनशैली मुख्य कारक रहँदै आएको छ । यसबाहेक, जापानको प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका कारण पनि त्यहाँका मानिस लामो आयु बाँच्न सफल भएका छन् ।